October 10, 2020 – Xorriya Online
Kulan ay isugu yimaadeen qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federalka iyo Senatarada Aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabelle ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay ugaga hadleen xaalada guud ee dhinaca siyaasada dowlad goboleedka Hirshabelle. Bayaan ay u badan tahay in ay diidi doonan beesha Madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdi Waare oo […]
Xuska Maalinta Caafimaadka Dhimirka Adduunka
10-ka Oktoobar waa mid kamid ah maalmaha loo goonida yeelay munaasabadaha sanad waliba la maamuuso oo ay diiwaangelisay Qaramada midoobay si lamid ah maalmaha badan ee ku jira Bilaha sanadka.! Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay bulshada Soomaliyeed in la garab istaago dadka nugul ee qaba xanuunka dhimirka. Mudane […]
Maxaa Maanta Hirshabeelle Kasoo Cusboonaaday?
Ilo xogagaal ah ayaa sheegaya in maalmaha soo socda ay Jowhar gaarayaan wafdi balaaran oo uu horkacayo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo raadinaya madaxweynaha maamulkaasi ee afarta sano ee soo socota. Walow shalay Gudoomiyaha barlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed uu gaaray magaaladda Jowhar waxaana socdaalkiisa ku wehlinaayay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha […]
Maandooriye loo soo waday Muqdisho oo lagu gubay…
Ciidanka boliiska Magaalada Beledweyne ayaa gacanta ku dhigay dhalooyin Khamro ah oo gaaraya 197 oo lagu qariyay qalab ganacsi,isla markaana loo waday Magaalada Muqdisho. Laamaha ammaanka ayaa sheegay in maxkamadda loo gudbin doono eedeysanayaashi lagu soo qabtay maandooriyahaan halista ku ah bulshada. Laamaha amniga ayaa Qamrigaan ku gubay goob fagaaro ah oo ay ku sugnaayeen […]
Diyaaraddii sidday Maydka Marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa markii ay soo caga dhigatay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde waxaa naxashka marxuumka oo la huwiyey Calanka Jamhuuriyadda ka soo dejiyey cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo qaadayey Saan-murugeysan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaadda janaasada ku tukaday, Alle ha u […]
Dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa waxa ay ku heshiiyeen xabbad-joojin ku meel gaar ah maanta oo Sabti ah ka bilaabata gobolka Nagorno-Karabakh ka dib laba toddobaad oo uu socday dagaal culus oo lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee in ka badan 25 sano ka dhaca gobolkan gooni u goosadka ah. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka […]